Uhlalutyo lokuthengisa kwangaphambili kunye ne-ThinkVine | Martech Zone
NgoMvulo, Novemba 2, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Inokuba yintoni iRejista yoTyalo-mali xa unokutshintsha umxube wakho wentengiso?
Lo ngumbuzo abathengi abakhulu abaneendlela zokuthengisa ezintsonkothileyo (ezilungeleleneyo phakathi kwenkitha yabalamli) abazibuza yonke imihla. Ngaba kufuneka siyeke unomathotholo kwi-Intanethi? Ngaba kufuneka nditshintshe ukuthengisa kumabonwakude ndikhangele? Iya kuba yintoni ifuthe kwishishini lam ukuba ndiyaqala ukuthengisa kwi-Intanethi?
Ngokwesiqhelo, impendulo iza ngovavanyo oluninzi kunye needola zentengiso ezilahlekileyo. Kude kube ngoku. Abathengisi bebesebenzisa indlela edlulileyo yokusebenza ukuqikelela ukusebenza kwentengiso yexesha elizayo. Kukho umngcipheko omkhulu onxulunyaniswa noku njengoko kongezwa oonxibelelwano abatsha ngokuhamba kwexesha. Ukutshintsha kwezinto ezihleliweyo ukusuka kwiphephandaba ukuya kwi-Intanethi ngumzekelo nje omnye omncinci. Ukuba uqhubekile nokuchitha inkcitho yakho ngaphandle kokuyitshintsha kwi-intanethi, ngekhe ufikelele kumandla aphezulu. Ngapha koko, unokumosha nje imali yakho.
I-ThinkVine usebenze "kuthekani ukuba" iimeko phantse ezilishumi. Abathengi babo bayathandeka… Ilanga Loyolo, uSc Johnson, iLegalZoom, iDel Monte, iHershey, kunye neCitrix ekwi-Intanethi.
I-ThinkVine iyakwazi ukwenza oku ngokusebenzisa inkqubo yokumodareyitha esekwe kummeli eyathi yaphuhliswa kwii-1940's. Ngokuqonda amacandelo emarike athe athenga kuwe ngokusebenzisa into nganye kunye nokusebenzisa imodeli kumacandelo akwezinye iindlela zoncedo, i-ThinkVine iyakwazi ukwakha imodeli yokuqikelela ukuba intengiso yakho iza kusebenza njani kwezinye iindlela zonxibelelwano. Yinkqubo kakhulu.
Imeko ephuhliswa yi-ThinkVine inokusetyenziswa ixesha elide, ixesha elifutshane kwintengiso esekwe kwimeko, kunye neenzame zokuthengisa ezisekwe kwicandelo. I-ThinkVine inokuxela imeko yokugqibela… ungathini xa uyekile ukuthengisa ngokupheleleyo!
Funda ngakumbi ngokuthatha ukhenketho lwemveliso ye-ThinkVine's Marketing Simulation and Software Planning.
Ukuxelwa ngokupheleleyo: I-CEO u-Damon Ragusa kwaye ndasebenza noBruce Taylor we Inkqantosi Kwiminyaka emininzi eyadlulayo ukusebenzisa iindlela ezifanayo ukuhambisa ukuthengisa ngeposi. UDamon wakha iimodeli zamanani eziguquguqukayo ezivela kwiiprofayili zabathengi kwaye, sisebenzisa i-automation kaBruce, sinokuzenzekelayo ukusebenzisa ezo modeli kulwazi lwedatha. Isicelo sabizwa ngokuba yiProspector kwaye sasebenza ngokuqaqambileyo. UBruce usilungiselele kakuhle isicelo kule minyaka kwaye usayisebenzisa kwinani labathengi abakhulu abathengisayo.
tags: ukuxela kwangaphambiliUhlalutyo oluqikelelweyoukuthengisa kwangaphambiliNgqondo
Nov 3, 2009 kwi-3: 28 AM
UDoug, loluphi uhlobo lwembali yokuthenga i-ThinkVine ekufuneka ikwenzile oku? Ngaba bangayenza le nto kwinkampani entsha / yokuqalisa?
Novemba 3, 2009 ngo-3: 57 PM
Ngokuqinisekileyo ifuna idatha yezembali. Ndicinga ukuba banabaxhasi abaneleyo, ukuhlanganisa iiprofayili kunokwenzeka. Akuthandabuzeki ukuba abathengi babo bayakuxabisa oko, nangona! Ndicinga ukuba basebenzisa ubuncinci unyaka we-1 wedatha-ndicinga ukuba ku-2 kuyacetyiswa.